बुडापेस्ट ट्रेन यात्रा: 10 तपाईंलाई थाहा हुन जरुरी कुराहरु | एक ट्रेन सेव
घर > यात्रा युरोप > बुडापेस्ट ट्रेन यात्रा: 10 तपाईंलाई थाहा हुन जरुरी कुराहरु
बुडापेस्ट पक्कै पनि हंगेरी को हब छ. यो धेरै रेल रोक्न छन् बुडापेस्ट ट्रेन यात्रा आउँदा यो एक केन्द्रीय बिन्दु हो. जबकि बुडापेस्ट र सामान्य मा ट्रेन यात्रा धेरै मान्छे को लागि एक नयाँ अनुभव रोमाञ्चक र अक्सर छ, यो पनि एक बिट समयमा स्नायु-wracking हुन सक्छ, विशेष गरी नयाँ र विदेशी शहरमा. सजिलो आफ्नो मन राख्न र मा एक नजर 10 कुरा तपाईं बुडापेस्ट रेल यात्रा बारे जान्नु आवश्यक.
त्यहाँ तीन मुख्य रेलवे स्टेशन जो तपाईंसँग बुडापेस्ट ट्रेन यात्रा गर्न सक्छन् र तिनीहरूले छन्:
पूर्व: पूर्व मा स्थित. यो बुडापेस्ट मुख्य अन्तर्राष्ट्रिय र सहरी रेलवे स्टेशन हो.
पश्चिम: पश्चिम मा स्थित.
डेली: दक्षिण मा स्थित
यात्रा: हवाई अड्डा स्थानांतरणहरू
बुडापेस्ट हवाई अड्डा टर्मिनल गर्न घनिष्ठ रेल स्टेशन2Ferihegy छ, रेल र बुडापेस्ट मा Nguyati स्टेशन बाट सञ्चालन संग.
सामान संग यात्रा
तपाईं कुनै पनि साथ शहर वरिपरि यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने backpacks, हैंडबैग वा अन्य कुनै पनि हाते झोला अन हुन रेल मा यात्रा गर्दा आफ्नो खुट्टा बीच भुइँमा यो भण्डारण गर्न निश्चित हुन सुरक्षित पक्ष.
नारी लागि सुरक्षा
बुडापेस्ट वरिपरि रेल द्वारा यात्रा महिलाहरु सजिलो महसुस गर्न सक्नुहुन्छ. शहर को केन्द्र एकदम ठूलो शहर लागि सुरक्षित छ र लामो यात्री आफ्नो साधारण अर्थमा प्रयोग र अनावश्यक जोखिम लिन छैन तिनीहरूले छुट्टी मा हो बस किनभने त्यसपछि तिनीहरूले आश्वासन कुनै हानि तिनीहरूलाई हुनेछ भनेर आराम गर्न सक्छन्.
पर्यटकहरु मा छनोट-पकेट प्राप्त गर्न सबैभन्दा सम्भावना भीड यस्तो रेल स्टेशन रूपमा सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा, जहाँ अन्य पैटी चोरी हुन सक्छ. जबकि यो प्रमुख चासो पर्यटकहरू एक कारण छैन सजग हुन सल्लाह छन् र चेतावनी रहन.
वरिपरि रही – बुडापेस्ट ट्रेन यात्रा
त्यहाँ सार्वजनिक परिवहन को एक ठूलो भाग तपाईं रेल गरेर सबैतिर बारेमा प्राप्त गर्न सक्छन् मतलब जो बुडापेस्ट विभिन्न रेलवे लाइनहरु र रेल यात्रा प्रकारका एक नम्बर हो. तपाईं आफ्नो गन्तव्य प्राप्त गर्न लिनु आवश्यक हुनेछ पटक र विभिन्न लाइनहरु जाँच गर्न निश्चित हुनुहोस्. तपाईं यो पाउन सक्नुहुन्छ यात्रा जानकारी अनलाइन वा रेल स्टेशन मा. तपाईं पनि गर्न सक्छन् टिकट किन्न को स्टेशन मा.
Get YourselfaBudapest Card to Travel by Train in बुडापेस्ट
एक पटक तपाईं एक दिन वा दुई बुडापेस्ट मा गरिएको छ र आफ्नो बेयरिंग मिल्यो, एक बुडापेस्ट कार्ड प्राप्त गर्न निश्चित हुन. कार्ड जस्तै केही मा नि: शुल्क प्रवेश रूपमा अतिरिक्तका एक नम्बर प्रदान गर्दछ संग्रहालयहरु, मुक्त बस/रेल / ट्राम / पानी यात्रा, र पानी क्रूज.
बुडापेस्ट दिन यात्राहरु ट्रेन यात्रा
त्यहाँ एक नम्बर हो शानदार दिन यात्राको बुडापेस्ट ट्रेन यात्रा गरेर लिन. तिनीहरूले केही गर्न हुनेछ अविश्वसनीय गन्तव्यहरू र तपाईं देखाउन शानदार दृश्यहरु बाटो साथ. तपाईं जान अघि आफ्नो अनुसन्धान गर्न निश्चित हुनुहोस्. बनाउन तपाईंले यो शहरमा आफ्नो समय बाहिर सबैभन्दा प्राप्त निश्चित.
बुडापेस्ट सबैभन्दा पुरानो र सबैभन्दा केही छ सुन्दर रेल स्टेशन हंगेरी मा. पूर्वी रेलवे स्टेशन भ्रमण गर्न निश्चित हुनुहोस् (पूर्व रेलवे स्टेशन) र पश्चिमी रेलवे स्टेशन (पश्चिम रेलवे स्टेशन) र तपाईं बुडापेस्ट ट्रेन यात्रा द्वारा तिनीहरूलाई प्राप्त गर्नुपर्छ, तपाईं छन् र बुडापेस्ट प्रस्ताव छ कि इतिहास र शानदार वास्तुकला अँगालेको गर्दा.
रेलवे लाइनको इतिहास
बुडापेस्ट मा M1 लाइन दोस्रो-पुरानो छ भूमिगत रेलवे संसारमा लाइन. यसलाई देखि सञ्चालन मा गरिएको छ 1894 र पनि एक रूपमा सूचीकृत गरिएको छ यूनेस्को विश्व सम्पदा साइट. त्यहाँ त छ धेरै इतिहास यो शहर र रेल मा उमेरका लागि र अझै पनि प्रयोगमा छन् कुशलतापूर्वक चलान.
बुडापेस्ट साँच्चै यो सबै छ गर्दछ र एक छ लोकप्रिय पर्यटक गन्तव्य. किन स्थानीय जस्तै हुन र सार्वजनिक परिवहन को फारम रूपमा रेल प्रयोग गर्न? तपाईं निराश गरिनेछ!
एक ट्रेन टिकट बुकिङ युरोपेली यात्रा को लागि मा? किन लिन3हाम्रो साइटमा मिनेट आफ्नो मार्गहरू लागि सस्ता टिकट पाउन. लगइन हाम्रो एक ट्रेन वेबसाइट सुरक्षित अब. टिकट धेरै तरिकामा लागि भुक्तानी गर्न सकिन्छ, सकेसम्म सजिलो रूपमा आफ्नो अनुभव गर्न सबै.
तपाईं आफ्नो साइट मा हाम्रो ब्लग पोस्ट इम्बेड गर्न चाहनुहुन्छ, त्यसपछि यहाँ क्लिक: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2F10-things-know-travel-by-train-in-budapest%2F%3Flang%3Dne - (को एम्बेड कोड हेर्न तल स्क्रोल)
#bucapest #traveleurope रेल यात्रा traveltips